UPDATE: 2 qof oo cudurka Coronavirus ugu geeriyootay Muqdisho iyo Dad hor-leh oo laga helay. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: 2 qof oo cudurka Coronavirus ugu geeriyootay Muqdisho iyo Dad hor-leh...
UPDATE: 2 qof oo cudurka Coronavirus ugu geeriyootay Muqdisho iyo Dad hor-leh oo laga helay.
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda caafimaadka XF Soomaaliya ayaa Talaadada maanta xaqiijisay inay geeriyoodeen 2 qof oo kamid ahaa bukaannadii laga helay cudurka COVID-19.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XF Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sidoo kale caddeysay in 24-kii saac ee ugu dambeeyay la diiwaan geliyay 48 xaalado cusub oo COVID-19 ah, ayna bogsoodeen 5 ruux oo kamid ah dadkii horay looga helay xanuunka.
Si kastaba, tirada guud ee xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay waxey noqdeen 228, waxaa ka bogsooday 19 ruux, waxaana guud ahaan dalka ugu geeriyooday 28.
dad hor leh laga helay
Dad u geeriyooday Covid-19 Muqdisho